Truth Post Nepal | गण्डकीको बजेटमा गाडी पूजा गर्न ५ लाख, कर्मचारीलाई घुम्‍न जान २ करोड - Truth Post Nepal गण्डकीको बजेटमा गाडी पूजा गर्न ५ लाख, कर्मचारीलाई घुम्‍न जान २ करोड - Truth Post Nepal
गण्डकीको बजेटमा गाडी पूजा गर्न ५ लाख, कर्मचारीलाई घुम्‍न जान २ करोड
ट्रुथपोस्ट June 24, 2020
पोखरा । गण्डकी प्रदेशले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा गाडी पूजा गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।
बजेटपछि सदनमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक पेस गरे । वार्षिक कार्यक्रममा गण्डकीले गाडी पूजा गर्न ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २२७११ खर्च शीर्षकमा पूजा खर्च राखिएको छ । सोही शीर्षकमा सवारी साधन र मेसिनरी खर्च शीर्षकमा उक्त बजेट छुट्याइएको हो ।
अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकको छलफल भइरहेको छ । सोही विधेयकको छलफलका क्रममा प्रदेश सांसद दीपक कोइरालाले पुजा खर्चमा पाँच लाख बजेट छुट्याइएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।
“मेरो आँखा भने सानो शीर्षकमा गयो । सवारी साधनको पूजा गर्न ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको रहेछ । आफ्नो पकेटको पैसाबाट गरेको भए हुन्थ्यो पूजा । यो परम्परावादी भयो कि भन्ने हो तर बजेट ठूलो भने होइन,” उनले भने ।
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्टिएको तर सबै खर्च नभएको बताए ।
“बजेट सबै खर्च त हुँदैन, तर पनि धेरै छुट्टिएछ । यो बजेट विश्वकर्मा पूजासहित अन्य पर्वमा सवारीसाधनको पूजा, मेसिनहरुको पूजा गर्नमा खर्च हुन्छ ,” उनले भने ।
यता, कर्मचारीलाई भत्ता कटौती गरेको गण्डकीले घुम्नका लागि भने २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बजेट पेस गर्दा “प्रदेशको सार्वजनिक स्रोतमा आउने संकुचन र कोरोना महामारी रोगको रोकथाम नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यमा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएको छु। यसका लागि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको” बताएका थिए ।
तर, बिदा पर्यटनको नाममा आगामी वर्ष प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरुलाई २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नामक यो कार्यक्रम पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । कोभिड १९ कारण भ्रमण वर्ष २०२० र गण्डकीको छिमेकी पर्यटन वर्ष २०२० दुवै रोकिए । तर, गण्डकीले भने २०२२ भित्रमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ ३ वर्षको लागि पर्यटन संयोजक नै नियुक्त समेत गरिसकेको छ ।
यस्तै, मंगलबारको गण्डकीको प्रदेशसभामा बोल्दै कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत सोच र पूर्वाग्रही रहेको बताए । यसबाहेक, अबको चुनावपछि प्रतिपक्षबिनाको सरकार बनाउने सोच र प्रमुख प्रतिपक्षलाई सिध्याउने तरिकाले बजेट आएको उनले आरोप लगाए । “यो जनमुखी होइन पार्टीमुखी दस्ताबेजको नमुना हो । विपक्षी सांसदको भूमिका घटाउने, तेजोवध गर्ने, प्रभावशाली कर्मचारी, वडाका प्रतिनिधि, संघका सांसदको प्रभावको आधारमा बजेट परेको छ,” उनले भने ।
यसबाहेक प्रतिपक्षी सांसदको योजना मागिएको तर मन्त्रालयले योजना नहालेको र विद्युतीय सवारीको विषयमा संघको नीतिभन्दा बाहिर रहेर बजेट आएको उनले बताए ।
“म यो पालि कुनै पनि मन्त्रीकोमा बजेट माग्न गइनँ । पर्यटन मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । पोहोर तपाइँको बजेट परेन, यो पालि के के छन् भनेर माग्नुभएको थियो । त्यही अनुसार सूची दिएको थिएँ । तर पनि योजना परेनछन् । फेरि पनि धन्यवाद । सरकारको प्राथमिकता के हो बुझ्न सकिएको छैन । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेशले १० करोड छुट्याइएको छ । जेठ १५ गते संघको बजेट आउँदा विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाइएको छ । यसले गर्दा प्रतिगाडीमा ४५ लाख रुपैयाँ बढी आउँछ । संघीय सरकारको पोलिसी विपरीत आएको छ यो बजेट,” उनले भने ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै बजेट परेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । “एउटा क्षेत्रमा ९७ करोड पर्छ । करिब ३५ अर्बको बजेटमध्ये मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा २ अर्बको बजेट छ । बजेट समन्यायिक हुनुपर्दैन ? सदनमा हामीले अर्थमन्त्रीको खोक्रो आश्वासन कति सुन्ने ?” उनले प्रश्न गरे, “हामी सदनमा भाँडाकुँटी खेल्न आएका हौं ? मेरै जिल्लाका कुरा गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले ३ भागको २ भाग बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्नुभएको छ ।”
उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका बिचमा गाडी चढ्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको आरोप समेत लगाए ।
“मुख्यमन्त्रीज्यूले भनेजस्तै सुशासन कायम गर्ने हो भने आफै २ करोडको गाडी छाडिदिनुस् । अनि नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँछ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच महंगो गाडी चढ्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ,” उनले भने ।
नेकपाका सांसद राजीव पहारीले भने बजेट औषधिको रुपमा आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
“रातो किताबलाई औषधिको रुपमा लिएको छु । औषधि गुलियो मात्र हुँदैन तीतो पनि हुन्छ । तितो भए पनि औषधिले रोग निको पार्छ । योजनाहरु धेरै राम्रा आएका छन् । हेलो मुख्यमन्त्री, वार रुमको काम प्रभावकारी भएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रदेश समस्या समाधान समिति मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छ । यसले कामलाई गति दिने मलाई विश्वास छ ।” उनले मुख्यमन्त्रीको प्रशंसा गर्दै भने ।
कोरोना भाइरस नेपाल: थप १२ लाख मानिस गरिब, १६ लाख बेरोजगार
कोरोना भाइरस नेपालः यूकेबाट आएका तीन जनामा नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस
एलेक्सी नभाल्नी: रुसी विपक्षी नेता हिरासतमा, बाइडनको टोलीद्वारा निन्दा
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल: आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने बस्ती व्यवस्थापन मुख्य चुनौती
Truth Post Nepal
भरतपुर : ०७, चितवन
Phone No. :- 9846956124
प्रबन्ध सम्पादक : मदन गौतम
निर्देसक : अमृता सापकोटा
सम्पादक : किसान शर्मा
समाचार समयोजक : नारायण सापकोटा
ब्यबस्थापक : अङ्कित ढुङ्गाना
© 2019 Truth Post Nepal. All Rights Reserved. | Designed By WebBankNepal